Fedora 31 Fametrahana torolàlana ho an'ny Newbies | Avy amin'ny Linux
Fedora dia tsy isalasalana fa lasa iray amin'ireo fizarana Linux matanjaka indrindra ary izany koa dia manana vondron'olona mpampiasa manohana azy. Isaky ny kinova ny fizarana fanatsarana isan-karazany dia nampiana ary ambonin'izany rehetra izany foana io dia momba ny fanamorana ny fizotrany. Toy izany ny fametrahana anao satria nihatsara be ny fizotrany ary ambonin'izany rehetra izany dia manandrana ny ho intuitive araka izay tratra.
Izany no antony Amin'ity lahatsoratra ity dia hanararaotra mizara amin'ireo vaovaom-baovao rehetra aho ary ireo olona mbola tsy nanandrana an'ity distro Linux tena tsara ity, ny fomba fametrahana ny rafitrao. Hatramin'ny namoahana ny kinova vaovao an'ny Fedora 31 (azonao atao ny mahafantatra ny antsipirihany ao amin'ity rohy manaraka ity).
Ity torolàlana ity dia natao ho an'ny vao teraka, saingy zava-dehibe ny hitadidian'izy ireo ao an-tsaina fa tsy maintsy manana fahalalana fototra izy ireo mba hahafahany mamorona haino aman-jery anaty tavoahangy misy distro ary hahafantatra ny fametrahana azy amin'ny solosain'izy ireo.
1 Fampidinana sy fanomanana ny haino aman-jery fametrahana
1.1 Haino aman-jery fametrahana CD / DVD
1.2 Mediam-pametrahana USB
2 Ahoana ny fametrahana ny Fedora 31?
Fampidinana sy fanomanana ny haino aman-jery fametrahana
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny misintona ny sarin'ny rafitra, izay azontsika raketina amin'ny DVD na USB drive, dia ampidinintsika avy amin'ny tranokalan'ny ofisialiny izany. ny rohy eto.
Vantany vao vita izany dia miroso amin'ny famoronana haino aman-jery fametrahana isika.
Haino aman-jery fametrahana CD / DVD
Windows: Azontsika atao ny mandoro ny iso amin'ny Imgburn, UltraISO, Nero na programa hafa na dia tsy misy azy ireo ao amin'ny Windows 7 aza izany ary avy eo manome antsika safidy hanindriana havanana amin'ny ISO.
Linux: Azonao atao ny mampiasa indrindra ilay miaraka amin'ireo tontolo misy sary, anisan'izany ny, Brasero, k3b, ary Xfburn.
Windows: Afaka mampiasa Universal USB Installer na LinuxLive USB Creator ianao, samy mora ampiasaina avokoa.
Na dia misy koa fitaovana iray izay omen'ny ekipa Fedora antsika mivantana dia antsoina izy io Fedora Media Mpanoratra avy amin'ny pejy Red Hat izay manazava ny fomba fiasany.
Linux: Ny safidy voatendry dia ny fampiasana ny baikon'ny dd, izay amariparitantsika izay lalana ananantsika ny sary Fedora ary koa ao amin'ilay toerana misy ny tendrombohitra misy antsika
Amin'ny ankapobeny ny lalana mankany amin'ny pendrive anao dia matetika / dev / sdb dia azonao atao ny manamarina ity baiko ity:
Efa fantatra fa mila manatanteraka ity baiko manaraka ity ianao
dd bs=4M if=/ruta/a/Fedora31.iso of=/ruta/a/tu/pendrive && sync
Ahoana ny fametrahana ny Fedora 31?
Efa nanomana ny fitaovana fampidirana, manohy mandefa azy amin'ny solo-sainantsika izahay. Mandritra ny fametahana an'io dia hiseho ny efijery izay ahitantsika ny safidy voalohany dia ny fitsapana ny rafitra mivantana. Izay rehetra ilaina amin'ny fampandehanana ny rafitra amin'ny maody mivantana dia hoentina amin'ny solosaina ary ao anatiny isika.
Ny fanjakana ao amin'ny birao rafitra dia afaka mahita kisarisary tokana izay manana ny anarana hoe "Ampidiro". Hanao izany isika amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa ao aminy na amin'ny fisafidianana azy ary amin'ny fanindriana ny bokotra fidirana.
Vita ity hisokatra ny magicien fametrahana, in izay ny efijery voalohany Hangataka amintsika hisafidy ny fitenintsika sy ny firenentsika koa izany. Vantany vao vita izany dia manohy izahay.
Ity dia hitarika antsika amin'ny menio lehibe an'ny mpamosavy fametrahana. Eto isika dia afaka mahita safidy vitsivitsy izay ny roa amin'izy ireo dia hamboarina ho azy aorian'ny fametrahana ny safidy teo aloha. Raha toa ka tsy ny faritra misy anao, ny firindrana ny fitendry na ny fiteny no ilainao dia azonao atao ny manova ny toe-javatra itovizanao amin'ireo safidy aseho ao anaty boaty aseho amin'ny mena.
Raha toa ka milamina ny zava-drehetra na efa namboarinao ireo safidy. Izao dia mila tsindrio fotsiny ny "toerana fampidirana".
Eto isika dia omena ny mety safidio ny kapila mafy ary amin'ny fomba hametrahana ny Fedora.
Rehefa misafidy ny kapila mafy ianao, dia azonao atao ny mamela safidy hafa ao amin'ilay faritra eo ambaniny. Manana an'io safidy io isika fa nanao ny fametrahana azy ho azy ny mpamosavy, amin'ny ankapobeny ny zavatra hataony dia mamafa ny kapila iray manontolo hametrahana ny Fedora.
Ny roa hafa dia ny safidy manokana izay mitantana ny fizarazaranay, manova ny haben'ny kapila, mamafa ireo fizara sns. Ny safidy atoro anao raha tsy te ho very vaovao ianao.
Eto aho dia manoro hevitra ny hisafidy ny farany (Advanced Custom) satria ny mpamosavy dia mampiseho ny fizarazaran'ny kapila, ny teboka misy azy ary ny safidy azontsika atao amin'ny efijery tokana. Tsy toy ny safidy hafa, ity iray ity dia mampiseho anao safidy amin'ny endrika lisitra mitete ary mety hampikorontana ny sasany.
Raha hamorona fizarazaran'i Fedora na hampiasa efa misy natokana ho an'i Fedora dia hofidintsika izany ary tsindrio faharoa. Araka ny hitanao dia hisokatra ny menio ahafahantsika mamafa ny fisarahana, mamorona fizara na mamolavola azy.
Ny fizarazarana natokana ho an'i Fedora dia omenay ny endrika "ext4" sy ny point point "/". Raha te hampisaraka teboka hafa ianao dia tsy maintsy manome fizara ho an'ny tsirairay, ohatra "/ boot", "/ home", "/ opt", "swap". Sns
Efa voafaritra izany, handeha tsindrio isika vita ary hiverina eo amin'ny efijery lehibe isika ny mpamosavy fametrahana, eto ny bokotra fametrahana dia ho afaka ary hanomboka ny fizotrany.
Amin'ny farany ihany tsy maintsy esorintsika ny fampitam-baovao ary hamerina.
Amin'ny fanombohana ny rafitra Magicien fanaingoana no hovonoina izay ahafahantsika manamboatra ny mpampiasa ny rafitra aminay amin'ny teny miafina.
Ary koa ny fampandehanana na fampandehanana toerana misy anao manokana ary fampifanarahana kaonty mailaka sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Fedora 31 Fametrahana torolàlana ho an'ny Newbies
Mars69 dia hoy izy:
Niezaka ny hizaha toetra ny Workstation an'ny Fedora 31 ao amin'ny Vbox miaraka amin'ny Linux Mint Tina Cinnamon aho saingy toa tsy mitombo ny raharaha. Voalamina tsara ny zava-drehetra. Ataoko fa fahadisoan'ny mpamily ny sary ratsy Nvidia, fa ny zavatra hitako tao amin'ny YouTube dia tsy dia ratsy. Aleoko kokoa x Mint sy Manjaro. Fiarahabana!
Valiny ho an'i Marses69
WhatsApp nitory ny vondrona NSO ho an'ny fitsikilovana cyber